Architectural muenzaniso 3D rokudhinda
Kushanda 3D yokudhinda riri mapurani munda haringorevi zvinonyatsorehwa mapurani 3D yokudhinda, asiwo ari kushandiswa pakugadzira kunzwisisa zvinoriumba, vakasiyana mhando (yekuronga yokutevedzera, mhepo tanera simulation yokutevedzera, jecha matafura, etc.) nokuti chirongwa Exchange uye kwokunze kuratidzwa.
3D nzvimbo marongerwo uye jecha tafura 3D pakudhinda
Mugore 3-dimentional nzvimbo marongerwo uye jecha tafura, kwekanguva kuvakwa hofisi zvivako, shongwe Cranes, simbi mbariro, makubhiti, michina, etc. inogona manually kugadziridzwa. The purojekiti Nzvimbo marongerwo uye CI magadzirirwo kunogona akaratidza zvimwe intuitively uye kwakarurama kubudikidza nekutumirwa kwemauto, kuronga uye muviri kwenzvimbo marongerwo patafura jecha. 3-dimentional nzvimbo marongerwo uye tafura jecha vangabatsirawo kuratidza ichangobva kuitika panzvimbo, kuwana nzira yakanakisisa, optimize zvekuvaka yavaive, zvinobudirira kuponesa mari uye kuvandudza chirongwa unhu. 3D Kudhinda Chokwadi pazera akura rwokugadzira. Mune ramangwana, 3D kudhinda kupinda zvakawanda nemhuri. Pamwe unogona kudhinda mhando dzose maturusi zvinhu uye kunyange michina Kuumbwa unofanira pamba, uye rimwe zuva tinogona enyaya imba yedu pachedu, uye zvose zvokufungidzira vachava achasimbiswa.
Prefabricated zvinoriumba 3D pakudhinda
SL 3D purinda yakarumbidza
All dzakatevedzana 3DSL akatevedzana 3D vaidhinda